Somaliland Waxa Halis Galin Kara Qabiilka Oo Ahaa Curiyihii Asalka Ahaa Ee Mideeyay Bilawgii. | Lughaya.Com
Somaliland Waxa Halis Galin Kara Qabiilka Oo Ahaa Curiyihii Asalka Ahaa Ee Mideeyay Bilawgii.
Added by Saylac on January 3, 2017.
Intii dagaal oogayaashu koonfurta baarqabka ka ahaayeen, Soomaalilaan waxa la odhan jirey “Way ka duwan tahayoo, halka koonfurta Talyaanigii ka burburshay tiirarkii dhaqanka, innaga Ingiriiskii, wuxuu falayba, halkaa inagama taaban.” Waxa looga hadli jirey sidii waxa koonfurta ka socday markaa uu ahaa wax aan laga malaysanba karin Soomaalilaan.
Maanta dad badan ayaa ka walaacsan xiisadda qabiiladu halkay saldhigani maalinta doorashada cid uun loogu dhawaaqo. Dadka qaarkoodna waxay arkaan uun tan dambe iyadoo aanay u muuqan in maalinta hore ee beel beel la isku hor fadhiistay. Ama dhe waxay u arkaan shar la huri waayey. Qofba si uu arkaba, in farta dhuunta lagu wada hayo maanta way muuqataa.
Soomaalilaan in qabiiladu halis gelin karaan ma aha wax lagula yaabo. Curiyihii asalka ahaa ee mideeyey dadkani haddaanu halis gelin karin maxay kale ayaa halis gelin kari lahaaba horta? Waxa lagu midoobo uun baa lagu qaybsami karaa ee wax kale oo male awaal ahi halis kumaba gelin karo.
Iyadoo sidaas ah ayaan u baahannahay in dhiisha wixii aan ku dhitaynaynay 25ka gu’ iyo dheeraadka aynaan dhayal ku qubin. Haddiise aan noqono “karis xun” inagana waa inoo bilaa quud, cid kalena haba sheegin. Intaan “karisku innaga xumaan” car si xarago leh midba kiisa ma u taageeri, gefka xisbigiisa ma isku gudbi, tolkiina ma u sheegi inaan walaalnimada la laalin?
Waa weydiimahaa waxa qof walba u yaal. Yeynaan cid kale eersanin haddaan kaalinteena gabno inagu.
Hadaba gabagabadii waxa manta muuqata in aynu dib ugu noqonayno habkii qabaailka taasi oo jiritaanka jamuuriyadan Somaliland halis ku ah waxana loo baahan yahay in arimaha qabyaalada talo qaran oo laga midaysayyahay laga yeesho lana adkeeyo hanaanka dawladnimo ee dalka iyada oo la xoojinayo kaabayaasha dhaqaalaha si loo xoojiyo ciidamada qaranka laguna abuuro